စစ်ကောင်စီကို အာဏာဖီဆန်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (ဒုတိယ… – PVTV Myanmar
စစ်ကောင်စီကို အာဏာဖီဆန်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (ဒုတိယ…
· 8 months ago ·42 Comments
စစ်ကောင်စီကို အာဏာဖီဆန်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦးကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (ဒုတိယပိုင်း)
“ရှင်းရှင်းပြောရရင် တစ်ယောက်မှကို မသေစေချင်ဘူး။ အကုန်လုံးက တိုင်းပြည်အတွက် ရတနာတွေပါ၊ ရွှေတွေ ငွေတွေထက် တိုင်းပြည်က လူတစ်ဦးက ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သေသွားတဲ့သူတွေထဲမှာက တကယ့်ကို တော်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တို့၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာမဲ့သူမျိုး ကျဆုံးသွားရင် တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းနစ်နာပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မသေစေချင်ဘူး၊ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လူဆိုရင် လူသားရဲ့တန်ဖိုးက ရှိပြီးသားပဲ။ ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ပြင်ဆင်နေပါတယ်၊ သိပ်မကြာတော့တဲ့ကာလမှာ ပြည်သူတွေအားလုံး လိုချင်တဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့(စစ်အာဏာရှင်ကို တိုက်ခိုက်ဖို့) အတွက် အချိန်နီးကပ်လာပြီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အဲ့အချိန်ကျရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်တပ်တစ်အားနဲ့ ဘာတွေပဲစွန့်လွှတ်ရ စွန့်လွှတ်ရ ဒီအောင်ပွဲကို ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ အားလုံးဝိုင်းပြီး ကြိုးစားကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကို အာဏာဖီဆန်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဟိန်းသော်ဦး
ဦးစီးအရာရှိ၊ အမှတ် (၉၉) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်
Like – 14K Share – 1954
အိသံ ဇဥ္ says:
2021-05-11 at 4:40 PM
မနေ့က တန့်ဆည်မှာ စကစခွေး၃ကောင်သေဆုံးမှုနဲ့ ကနေ့ တခြားမြို့မှ ခွေးတွေပါ အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာပါတယ် ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပါ အယောက်၁၀၀လောက်ရှိပါတယ်😌
Thinn Wai Khine says:
2021-05-11 at 4:49 PM
မြန်မြန်လုပ်ကြပါ အားကိုးပါတယ် ခုဖမ်းခေါ်ပီး ၂၄နာရီအတွင်းအလောင်းပြန်ပို့တာ ဘယ်နေ့ကိုယ်ဖြစ်မလဲ စောင့်နေရသလိုကြီး ဥပဒေမဲ့ကာလကြီး
Kyl Sin says:
2021-05-11 at 5:01 PM
ဗိုလ်မှူးရဲ့စကားကိုကြားရတိုင်းအင်းအားဖြစ်စေတယ် သူပြောတဲ့စကားတိုင်မှားလည်းဗိုလ်တယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းရည်ချင်းနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ် တွေးခေါ်ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်တယ် သတင်းထောက်တယောက်ကမေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကိုလည်းဖြေဆိုတဲ့အခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ အတွင်းစိတ်သ‌ေဘာထားကို‌ေဖာက်တွင်းပြီးသိရှိနိုင်‌ေလာက်‌ေအာင် ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ် ဖြေ သင့်တဲ့စကားကိုလည်းသူ့ရဲ့အသိဥာဏ်နဲ့သူဖြေတယ်
လွှို့ဝှက်ထားသင့်တဲ့ စကားကြတော့ သူမဖြေခဲ့ဘူး သူ့ရဲ့ ပါးနပ်တဲ့သတိ အမြဲရှိတယ် လေးစားတယ် ရှင့် ဘေးကင်းပါစေအောင်မြင်ပါစေရှင့်
Hoops NJoy says:
2021-05-11 at 5:02 PM
ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား ဗိုလ္မႈးေဘးကင္းပါေစ အေဝးေရာက္ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ားလည္း ႀကိဳးစားသမွ် ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ ေန႔ေန႔ညညဆုေတာင္းပါတယ္
Wint War says:
2021-05-11 at 5:03 PM
ဗိုလ်မှူး ဟိန်း​သော်ဦး ​ဘေးကင်းပါ​စေ၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်​ပေးမယ့် ဖခင်လို့ခံစားရတယ် 🥰😘 အခြား​သော ပူး​ပေါင်းကူညီ​ပေး​နေတဲ့ တပ်မ​တော်သား​တွေ၊ သင်တန်း​ပေး​နေသူဆရာ​တွေ၊ ပညာယူ​နေသူလူငယ်များအားလုံး၊ ကာကွယ်​စောင့်​ရှောက်လက်ခံ​ပေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များအားလုံးကို ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏၊ ​လေးစားပါတယ်၊ ဦးညွှတ်အ​လေးပြုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ပြည်သူ​တွေက​တော့ လာရင် အဆုံးစွန်ထိပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။
Zen Der says:
2021-05-11 at 5:05 PM
ပြောမပြတတ်အောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗိုလ်မူး. အစစအရာရာဂရုစိုက်ပါ. ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ.
Lwin Mar says:
2021-05-11 at 5:07 PM
စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအခံရှိတော့ လုပ်ရပ်ကောင်း ပြနိုင်တဲ့ သူရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားအခွန်းတိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်….ကျေးဇူးပါ ဗိုလ်မှူး
Mon Mon Swe says:
2021-05-11 at 5:25 PM
​ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဗိုလ်မှူး ..
ဗိုလ်မှူးနှင့် က​လေးများအားလုံးလည်း ​ဘေးကင်းကြပါ​စေ ..
အ​ရေး​တော်ပုံ အမြန်​အောင်ပါ​စေ 🕊
2021-05-11 at 5:27 PM
စစ်သာကတော့ တော်ကီဘယ်ကောင်းမလဲ ။ ။။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုစကားမျိုးကြားရတာတော့ အားရမိတယ်
2021-05-11 at 5:40 PM
တကယ်တော်တဲ့ ဗိုလ်မှူးပါဗျာ စကားအပြောအဆို တည်ကြည်မှူ့ စိတ်ဓာတ် တကယ်လေးစားပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ မနှိုင်းသင့်ပေမယ့်
ဗိုလ်ချုပ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူမျိုး ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးလို့ အတိုင်းမသိလေးစားမိပါတယ် ပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အသင့်စောင့်နေပါတယ်
Mg Zin says:
2021-05-11 at 6:06 PM
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး ခင်ဗျာ။
Chan Myae Soe says:
ပြည်သူတွေကလဲ စစ်ကိုအရမ်းမုန်းပါတယ်။ မလိုချင်ပါ။
သို့ပေမယ့် နောက်ဆုံး ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်နေရင်တော့ ရွေးကြရတော့မှာပါပဲ။
စစ်သားတွေရဲ့ အဓိကပြဿနာက သူတို့တွေကိုယ်တိုင် ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်
အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေ များစွာ ဆုံးရှုံးနေရတယ် ဆိုဒါ မသိကြရှာဘူး
မြန်မြန် အသိတရား ရကြပါစေ
Linn Waddy Maung says:
2021-05-11 at 6:27 PM
ဟန္ေဆာင္မွုအကင္းဆံုး အျပတ္သားဆံုး အရဲရင့္ဆံုး ကိုယ္ Respect အေပးမိဆံုး ဗိုလ္ျကီးဘဲ
AyeAye Thwe says:
2021-05-11 at 6:46 PM
ဗိုလ်မှူးရဲ့စကားကိုကြားရတိုင်းအင်းအားဖြစ်စေတယ် သူပြောတဲ့စကားတိုင်မှားလည်းဗိုလ်တယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းရည်ချင်းနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ် တွေးခေါ်ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်တယ် သတင်းထောက်တယောက်ကမေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကိုလည်းဖြေဆိုတဲ့အခါမှာလည်း သူ့ရဲ့ အတွင်းစိတ်သ‌ ဘောထားကို‌ ဖောက်ထွင်းပြီးသိရှိနိုင်‌ လောက်အောင်ကို ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ် ဖြေ သင့်တဲ့စကားကိုလည်းသူ့ရဲ့အသိဥာဏ်နဲ့သူဖြေတယ်လျို့
ဝှက်ထားသင့်တဲ့ စကားကြတော့ သူမဖြေခဲ့ဘူး။ သူ့ရဲ့ ပါးနပ်တဲ့သတိ အမြဲရှိတယ်။လေးစားတယ် ရှင့် ဘေးကင်းပါစေ။အောင်မြင်ပါစေရှင့်
2021-05-11 at 6:47 PM
ေျပာမျပတတ္ေအာင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗိုလ္မႉး အစစအရာရာဂ႐ုစိုက္ပါ. ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းပါေစ.🙏
Ah Linn says:
2021-05-11 at 6:54 PM
ဟုတ္က့ဲပါ အားတင္းထားပါ တယ္ ဗုိလ္မႉး…
သက်တံ့ ရောင်ခြယ် says:
2021-05-11 at 6:58 PM
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး။ ကျန်းမာပါစေ။ ဘေးကင်းပါစေ။ အရာရာအောင်မြင်ပါစေ။
အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်သလို အဆိုးဆုံးဖြစ်လာရင်လည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
2021-05-11 at 7:08 PM
စကားပြောတဲ့ နေရာမှာ တည်ငြိမ်တယ်၊ မေးနေတာကို အေးဆေးပဲဖြေသွားတယ်၊ လူတော်တစ်ယောက်ပါ..
2021-05-11 at 7:26 PM
ဗိုလ်မှူး ကျန်းမာပါစေ ၊ ပြည်သူကိုချစ်ပေးတယ့် အတွက်လဲ ပြည်သူ့မေတ္တာအပြည့်အဝပြန်ရပါစေ။
2021-05-11 at 7:33 PM
ပြည်သူတွေရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးပြီး ပြည်သူတွေနဲ့တသားထဲရှိနေပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဗိုလ်မှူးလို တိုင်းပြည် နဲ့ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးမဲ့ စစ်သားကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာပါစေ ဗိုလ်မှူးနှင့်တကွမျိုးဆက်သစ်လူငယ် လေးများလဲ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ
2021-05-11 at 7:42 PM
သ​ပြေညိုနဲ့ကြို​နေပါ့မယ်…’ဗမ’နှင့်GZ​လေးများ ​ဘေးကင်းပါ​စေ ခလုတ်မထိဆူးမငြိပါ​စေနှင့်…တိုက်ပွဲတိုင်း​အောင်ပါ​စေ🙏🙏🙏
လေးစားပါတယ် ပြောမပြတတ်အောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗိုလ်မူး. အစစအရာရာဂရုစိုက်ပါ. ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ.🙏
စစ်တပ်မှာ ဒီလိုအမှန်တရား ဘက်ကို မြတ်နိုးတဲ့ ဗိုလ်မူးတို့လို လူတွေ ရှိနေသေးတာ ကြားသိရတော့ အရမ်းအားတက်မိပါတယ်
2021-05-11 at 8:39 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗိုလ်မှူး အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဗိုလ်မှူးလို လူမျိုးတွေပဲ အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး အကြီးအကဲတိုင်းဟာ ဗိုလ်မှူးလို စိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေပဲ ဖြစ်‌စေချင်ပါတယ် ။
ခံယူချက်အတိုင်း အစစအရာရာ အောင်မြင်ပါစေ ဗိုလ်မှူး။ ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ပါ ဗိုလ်မှူး။
Myo Khant says:
2021-05-11 at 9:12 PM
မြို့သိမ်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရင် ဒီးကောင်တွေပြေးစရာမြေ မရှိစေရဘူး ပြည်သူတွေရဲ တာဝန်ထာလိုက်
2021-05-11 at 9:48 PM
ဗိုလ်မှူး မျော်လင့်သလို ဖြစ်မှာသေချာပါတယ် မြို့ပြ ကိုဝင်လာခဲ့ရင် ရိတ်ခါမယူခဲ့ပါနဲ့ ပြည်သူတွေက ထောက်ပန့်ကြပါမယ် လက်နက်ဘဲယူခဲ့ကြပါ.. တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ကြဖို့ လူတိုင်းကကြိုတင်တွေးထားပြီးကြပါပြီ
2021-05-11 at 10:07 PM
အနာဂတ် ပြည်သူ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ် ဗမ ၊ လေးစားလျက်
2021-05-11 at 10:47 PM
​လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး …. ဗိုလ်မှူးတို့လို လူ​တွေချည်းဘဲဆို ပို​ကောင်းမယ်
2021-05-11 at 10:53 PM
ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ဗိုလ်မှုးဟိန်းသော်ဦး ရှင့်။
Nwe Nwe Hlaing says:
2021-05-11 at 11:13 PM
ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်ပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
နွေဦး ကံ့ကော် says:
2021-05-12 at 11:03 AM
ယောက်ျားဆိုတာ ဒါမျိုးမှ စစ်သားကောင်းတစ်ယောက်
2021-05-12 at 4:54 PM
လေးစားကြည်ညိုရပါတယ် ဗိုလ်မှူး၊ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးပိုမို သယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ပြည်သူများကိုယ်စား မေတ္တာပို့ပါတယ်။ 💝
2021-05-12 at 5:12 PM
ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဘေးကင်းပါစေ။ အောင်မြင်ပါစေ။
Poe Poe Kyi says:
2021-05-12 at 5:36 PM
သည်နေ့အတွက် စိတ်ဓာတ်တွေကျ အားငယ်နေတာ ဗိုလ်မှူးစကား နားထောင်လိုက်ရတာ ပြန်အားရှီသွားတယ် သည်လို တပ်မတော်သားတွေ ရှီတယ်လေ ဆိုပြီး အားတက်မိပါတယ်
လေးစားပါတယ် ဗိုလ်မှူး အားလည်းအားကိုးပါတယ်
Kyi Kyi Sein Thet says:
2021-05-13 at 9:35 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို တတပ်တအားကယ်တင်န်ုင်ပါစေ
Saw Yadanar says:
​လေးစားပါတယ်ဗိုလ်မှုးပြည်သူ​တွေကိုကယ်တင်​ပေးပါ လူ​တွေက​ပြောကြတယ် လူအင်အား၅သိန်း​ရှိတဲ့တပ်မှာ လူ​ကောင်းတ​ယောက်မှမရှိ​တော့ဘူးလားဆိုပြီး အခု​တော့​ပေါ်ထွက်လာပါပြီ ဗိုလ်မှုးလို အမှန်တရားဘက်မှာရဲရဲ ရပ်တည်ရဲတဲ့ အခြားတပ်မ​တော်သား​တွေလည်းအများကြီးထွက်​ပေါ်လာပါ​စေ
Seeker Seeker says:
2021-06-07 at 9:00 PM
Tun Min Hlaing says:
2021-07-19 at 6:37 PM
2021-07-30 at 6:59 PM
Yone Tun says:
2021-08-05 at 3:33 AM
-မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ အကာအကွယ်အကင်းမဲ့ဆုံး နှင့် အဆိုးရွားဆုံးလူမှု အကျပ်အ…
ဖိရင်ကြွ … ထိရင်ချ – သီချင်း…